SocialBee: Ny sehatra media sosialy amin'ny orinasa madinika miaraka amin'ny serivisy Concierge | Martech Zone
Nandritra ny taona maro dia nampihatra sy nampiditra sehatra media sosialy am-polony ho an'ny mpanjifa aho. Mbola manana fifandraisana tsara amin'ny maro aho ary mbola mahita ahy mampiroborobo sehatra vaovao sy efa misy ianao. Mety hampisavoritaka ny mpamaky izany… manontany tena hoe nahoana aho no tsy manoro sy manosika sehatra iray ho an'ny rehetra fotsiny. Tsy manao izany aho satria tsy mitovy ny filan'ny orinasa tsirairay.
Betsaka ny sehatra media sosialy afaka manampy ny orinasa… fa ny tanjonao, tetika, mpihaino, fifaninanana, dingana, talenta, teti-bola, fandaharam-potoana, sehatra hafa ao amin'ny stack anao… samy manana anjara toerana lehibe amin'ny mpivarotra izay ahafahanao mahazo fiverenana amin'ny fampiasam-bola tsara indrindra. Izany no mahatonga ny tanjona ao amin'ny tenifototra ny Martech Zone dia fikarohana, fianarana ary fantaro. Tsy afaka manisy laharana ny vahaolana amin'ny kaomandy aho raha tsy azoko ny orinasanao. Ny havanana vahaolana fa ny orinasanao dia mety ho mifanohitra amin'izay atolotro ho an'ny hafa.
SocialBee: Ho an'ny Solopreneurs, orinasa madinika ary masoivoho manompo azy ireo
SocialBee dia sehatra fitantanana media sosialy izay mifantoka amin'ny famoronana votoaty sy fizarana amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy. Ny orinasa dia miavaka amin'ny hoe ny sehatra dia miaraka amin'ny fanofanana sy serivisy concierge azo atao mba hanampiana ireo solopreneurs, orinasa madinika ary masoivoho izay manompo azy ireo. Tsy vitan'ny hoe mahazo ny sehatra ianao, fa afaka manampy manampahaizana manokana manokan-tena tanteraka hanampy anao amin'ny famoronana votoaty, doka, fitomboan'ny vondrom-piarahamonina, sy ny maro hafa.
Ny fizarana votoaty dia mifantoka ao anatiny SocialBee dia tena miavaka, ny endri-javatra dia ahitana:
Ireo sokajy votoaty media sosialy - Ny sokajy dia manampy anao handamina lahatsoratra mba hahazoana fifangaroana tsara kokoa amin'ny votoaty ary hanome anao fifehezana tsara kokoa ny fandaharam-potoana, fanamboarana ho an'ny tamba-jotra tsirairay, famokarana fiovaovana, fanitsiana betsaka ary filaharana indray. Azonao atao mihitsy aza ny miato na mihazakazaka sokajy manokana.
Famoahana haino aman-jery sosialy - mamolavola sy mijery ny lahatsoratrao amin'ny media sosialy miaraka amin'ny tenifototra voatahiry amin'ny alàlan'ny mombamomba na sehatra. Ny sehatra ihany koa dia manohana emojis mba hisongadina. Afaka manafatra lahatsoratra amin'ny alalan'ny CSV, RSS, Quuu, na Pocket.
Fampidirana haino aman-jery sosialy - avoaka ao amin'ny mombamomba anao, pejy ary vondrona Facebook. Avoaka ao amin'ny Twitter. Avoahy amin'ny mombamomba anao LinkedIn sy ny pejin'ny orinasanao. Mandefa sary, carousels, na horonan-tsary ao amin'ny Instagram. Alefaso ao amin'ny Google My Business.
Fandaharam-potoana amin'ny media sosialy - Jereo ny kalandrie, alefaso amin'ny fotoana voafaritra, lany daty takiana amin'ny daty voafaritra na aorian'ny fizarana maromaro. Fandaharam-potoana tsirairay mifototra amin'ny mombamomba tsirairay.
Email Notifications - mampandrenesina rehefa tsy mahomby ny hafatra, rehefa vita ny fanafarana, na rehefa foana ny filaharana sokajy misy anao.
Analytics - manambatra ny fanafohezana URL (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) ary mifototra amin'ny sokajy Fikirana UTM hanara-maso ny fahombiazan'ny atiny.
Boky Demo SocialBee
Ity misy vidéo fijery momba ny sehatra:
Na mitantana ny anao manokana ianao Tetikasan'ny media sosialy na ny paikadin'ny mpanjifanao, SocialBee dia manolotra fonosana serivisy media sosialy isam-bolana, ao anatin'izany:
Famoronana votoaty ara-tsosialy - Ny haino aman-jery sosialy dia ampahany manan-danja amin'ny varotrao, indrindra raha te-hisarika ny saina sy hanentana ny saina ianao. Ny dingana voalohany amin'ny fananganana fanatrehana matanjaka amin'ny media sosialy dia ny fizarana votoaty avo lenta sy manintona tsy tapaka.
Content Marketing - Ny famoronana votoaty dia ahafahanao manangana fifandraisana ary mamorona tsy fivadihana sy fahatokisana amin'ny mpanjifanao sy ny ho avy. Ankoatr'izay, ny votoaty vita tsara dia miteraka fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao ary lasa singa manan-danja amin'ny fizotry ny famoronana fitarihana anao.
Engaged Growth - Ny fampivoarana fifandraisana 1 amin'ny 1 hananganana vondrom-piarahamonina manodidina ny orinasanao dia mahasoa! Ny vondrom-piarahamonina dia tsy loharanon-kevitra lehibe ihany fa raha miorina tsara ihany koa, azonao atao ny mamadika ny mpihaino anao ho mpanjifa mandoa vola ary avy eo amin'ny mpisolovava mahatoky.
Fividianana sy Fanamafisana - Ny ezaky ny dokam-barotra amin'ny media sosialy dia tsy vitan'ny hoe manamafy ny fahatongavanao sy mamela anao hizara ny hafatrao amin'ny fantsona maromaro, fa mifanaraka amin'ny teti-bola rehetra ary mora refesina. Fanampin'izay, mahazo fidirana amin'ny fepetra kendrena manokana ianao.
Ary, raha mila fanampiana fotsiny ianao amin'ny fanombohana, dia manolotra fonosana sarany ny SocialBee hamindra ny atiny rehetra any. SocialBee na mitady hanomboka vaovao ianao dia afaka manampy anao izahay amin'ny fametrahana voalohany. Manomboka amin'ny famindrana ny atiny rehetra sy ny fanovana teo aloha mankany amin'ny SocialBee, ka hatramin'ny fametrahana fandaharam-potoana ho anao, dia afaka miantehitra aminay ianao!
Mianara bebe kokoa momba ny SocialBee Services
Fanambarana: mpiara-miasa amiko aho SocialBee ary mampiasa rohy afiliana ato amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: bitlyBL.INKContent Marketingserivisy marketing votoatycsv amin'ny media sosialyFacebookFacebook groupFamoahana vondrona Facebookpejy FacebookFamoahana pejy FacebookMombamomba ny Facebookgoogle ny orinasakogoogle my business publishingInstagramfamoahana instagramJotURLLinkedin pejy orinasaLinkedin Company page publishingPixelMepaosyquuurebrandlyReplugRocketLinkRSSfandraharahana madinikamasoivoho orinasa madinikafampahalalam-baovao sosialyfamoronana votoaty media sosialyfitomboan'ny media sosialyfampidirana media sosialyfamoahana media sosialyfandaharam-potoana amin'ny media sosialytolotra media sosialyTetikasan'ny media sosialyfiofanana amin'ny media sosialysocialbeeTwittermpanafoana url